DEG DEG DAAWO: Sepp Blatter oo iska casilay xilka Madaxweyne ee Xidhiidhka kubada cagta aduunka FIFA. |
DEG DEG DAAWO: Sepp Blatter oo iska casilay xilka Madaxweyne ee Xidhiidhka kubada cagta aduunka FIFA.
Madaxweynaha xidhiidhka kubada cagta aduunka Sepp Blatter ayaa ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkaasi.
Blatter oo 79 jir ahi waxa uu kursigan ku fadhiyay mudoo 17 sano ah ,waxanu u markii shanaad oo xidhii ah ku guuleystay tartanka madaxtinimada FIFA afar cisho ka hor.Duqa ree Switzerland ayaa galabta oo salaasa ah ku dhawaaqy inuu xilkaa ka dagay shir jaraid oo uu ku qabtay maglada Zurich.
Is casilaada Blatter ayaa ka danbaysay fadeexad musuq maasuq oo soo food saartay xidhiidhka ciyaaraha aduunka .Xoghayihii guud ee FIFA Jerome Valcke ayaa waxa ku wada baadhitaan waaxda cadaalada Maraykanka waxana lagu eedeeyay inuu 10 million oo dolar uu ka qaatay madaxweyne ku xigeenkii hore ee FIFA Jack Warner.
‘Waxan qaban doonaa shirweyne aan caadi ahayn si loo doorto ninkii aniga i badali lahaa’ ayuu yidhi Sepp Blatter.
Lama garanayo cidda badali doonta hase yeeshee Prince Ali oo u dhashay wadanka Jordan oo ahaa ninkii la tartamayay doorashadii dhawayd afar maalin ka hor ayaa loo saadaalinyaa inuu xilkaa qaban doono,waxii kasoo kordha kala soco Gabiley.net